प्रधानमन्त्रीकाे अयाेध्याबारे अभिव्यक्तिः विवाद की बहस - Lekhapadhee "Opinion"
लेखापढी २ श्रावण २०७७, शुक्रबार २१:२७
हिन्दू समाजमा निकै श्रद्धापूर्वक पुजा गरिने त्रेतायुगीन एक पात्र (भगवान), जो निष्ठा र न्यायका प्रतिमूर्ति मानिन्छन भगवान श्रीराम । उनी अयोध्याका राजा दशरथ र काैशल्याका सबैभन्दा जेठा सुपुत्र थिए । जसलाई विष्णुका ७ ओै अवतार मानिन्छ । उनलाई महापुरुषको रुपमा पनि चित्रित गरिएको छ । वर्तमान समयमा पनि उनको रामराज्यको चर्चा हुन्छ । भलै उनीबाट केही त्रुटिहरु भएका होलान । उनीप्रतिको आस्थालाई भगवान विष्णुकै अर्का दुईअवतार मानिएका कृष्ण अवतार र बुद्ध अवतारले धुमिल्याउन सकेको छैन तर यतिखेर नेपालको समाज समर्थन र विरोधमा धुमिल्लिएको छ, एक किसिमको प्रतिस्पर्धा चलेको छ । प्रम ओलीले दिनुभएको बक्तब्यमा भगवान रामको जन्मभूमि अयोध्याको बारेको नेपालमा मात्र सिमित नभएर भारतका सञ्चारमाध्यम र हिन्दू धर्म सम्बद्ध व्यक्तिहरुको दिमाग तर‌ंगित गरिदिएको छ । केही हिन्दू धर्मका र धार्मिक संस्थामा आवद्ध मानिसहरुले यसको विरुद्धमा वनारसमा नेपाली माथि दुर्व्यवहार गरेर निर्लज्ज र असहिष्णुता पनि प्रकट गर्न सुरु गरिसकेका छन ।
प्रम ओलीले दिनुभएको बक्तब्यमा भगवान रामको जन्मभूमि अयोध्याको बारेको नेपालमा मात्र सिमित नभएर भारतका संचारमाध्यम र हिन्दू धर्म सम्बद्ध व्यक्तिहरुको दिमाग तर‌ंगित गरिदिएको छ । केही हिन्दू धर्मका र धार्मिक संस्थामा आवद्ध मानिसहरुले यसको विरुद्धमा वनारसमा नेपालि माथि दुर्व्यवहार गरेर निर्लज्ज र असहिष्णुता पनि प्रकट गर्न सुरु गरिसकेका छन ।
कुनै पनि व्यक्ति सम्भवत: सबै कुरामा विज्ञ वा पोख्त हुन सक्दैन । प्रम वली पनि रामायणका विज्ञ त हाेइनन, न त उहाँ इतिहासबिद् नै हो । उनले रामको जन्मभूमिबारे दिएको अभिव्यक्ति प्रमाणित हैनन नै, तर त्यसलाई हैन भन्न नसकिने आधारहरु सहित बोलेका चाहिँ हुन । रामको जन्मभूमी भनिएको अयोध्यापुरीलाई धेरै ठाउँमा नामाकरण गरिएको रहेछ । यसलाई रामको भक्ति र श्रद्धाको रुपमा स्थानहरुको नामाकरण गरीएको हुन सक्छ । जस्तो कि आजभोली गल्लि र राजमार्गहरुको नाम नेता र विद्वान् व्यक्तिहरुको नामाकरणबाट हुने गरेको छ ।
भगवान रामकाे जन्मभूमीबारे विभिन्न दावि हुँदै आइरहेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री वलीले नेपालमा जन्मभूमी बारे अनाैपचारिक दावि गरेकाे भएता पनि भारतमा पनि भारतकै विभिन्न स्थानमा पनि अयोध्याको दाबी रहेकाे देखिन्छ । रामकै चरित्रमा आधारित रामायण, संस्कृत भाषाका आदिकवि वाल्मिकिद्वारा सर्वप्रथम लेखिएको मानिएको छ । उक्त रामायणमा वर्णन गरिएका स्थानहरु र समयहरुलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री वलीले विरगन्जको ठोरी नै असली अयोध्या हो भन्ने दाबि गरेका हुनसक्छन । उनले विभिन्न आधारसहित दाबि गरेका थिए । त्रेतायुगीन कुरालाई प्रमाणित गर्न त्यति सजिलो भने पक्कै छैन । यो दाबीलाई प्रमाणित गर्ने धेरै तर्कहरु प्रस्तुत गरेर मिडियामा साथै लेखहरु, अन्तरवार्ताहरु आइरहेका पनि छन । जुन तर्कहरु रामको जन्म अहिलेको नेपाली माटोमा भएको प्रमाणित गर्नतर्फ उन्मुख छन । यी कुराहरु खोज र अन्वेषणका माध्यमबाट प्रमाणित भयो भने नेपाली र सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरुलाई खुसीको कुरा हो ।
खासमा प्रमले प्रस्तुत गरेको तर्कहरुलाई पनि नकार्न चाहि सकिँदैन । यसको खोज उत्खन्नपछि सत्यता त बाहिर आउछ नै । उहाँले दिएको तर्कलाई र प्रमाणहरुलाई अहिले खन्डन गरेर विवाद गर्नु भन्दा उत्खननमा बिशेष ध्यान दिनुपर्दछ । अर्को कुरा छिमेकी देश भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता आउने भो भनेर रोइलो गर्ने नेपाली बुज्रुकहरु र विद्वानहरु यति धेरै भेटिए । यदि रामको जन्मभुमी प्रमले दाबि गरेको स्थानमै हो रै छ भने के तिक्तताभन्दा माथि अरु के के हुन्छ होला त छिमेकी मुलुकसँग ? के बज्रपात नै हुन्छ ? भारत भन्ने देशको प्राण नै यसैमा अडिएको हो ? यो नक्कली सावित भएमा भारतले लाज शरम मानेर शिर झुकाउनु पर्ने हो ? दशकौदेखि भारतमा पनि अयोध्याका बारेमा विवाद कायम छ । नेपालले दाबि गर्नै नपाउने हो ? प्रमाणका रुपमा दाबि गरिएका आधारहरु त सबैले स्विकारेको कुरा हो । ऋषिहरुको गुफा, सहरहरुको नामाकरण, नदीको अवस्थिति, आवतजावतको समय, जो अयोध्यासँग सम्बन्धित छन नै । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा भारतीय साधु, सन्तहरु किन आक्रोसित हुनु पर्ने ? दाबि गरिएको ठाउँमा रामको जन्म हुन नसक्ने प्रमाणहरु ल्याएर खुल्ला बहस गरे हुन्न ? दाबि गर्ने पक्षको तर्कलाई विपक्षीहरुले खन्डन गर्न सक्दैनन भने त उनीहरुले ठोस प्रमाणबाट पुष्टि गर भनेर प्रमलाई चुनाैति दिनु पर्ने हो नी । जो उत्खननबाट हुन सक्ला ।
अर्को कुरा छिमेकी देश भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता आउने भो भनेर रोइलो गर्ने नेपाली बुज्रुकहरु र विद्वानहरु यति धेरै भेटिए । यदि रामको जन्मभुमी प्रमले दाबी गरेको स्थानमै हो रै छ भने के तिक्तताभन्दा माथि अरु के के हुन्छ होला त छिमेकी मुलुकसँग ? के बज्रपात नै हुन्छ ? भारत भन्ने देशको प्राण नै यसैमा अडिएको हो ? यो नक्कली सावित भएमा भारतले लाज शरम मानेर शिर झुकाउनु पर्ने हो ? दशकौदेखि भारतमा पनि अयोध्याका बारेमा विवाद कायम छ । नेपालले दाबि गर्नै नपाउने हो ? प्रमाणका रुपमा दाबी गरिएका आधारहरु त सबैले स्विकारेको कुरा हो । ऋषिहरुको गुफा, सहरहरुको नामकरण, नदिको अवस्थिती, आवतजावतको समय, जो अयोध्यासँग सम्बन्धित छन नै । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा भारतीय साधु, सन्तहरु किन आक्रोसित हुनु पर्ने ? दाबी गरिएको ठाउँमा रामको जन्म हुन नसक्ने प्रमाणहरु ल्याएर खुल्ला बहस गरे हुन्न ? दाबि गर्ने पक्षको तर्कलाई विपक्षिहरुले खन्डन गर्न सक्दैनन भने त उनीहरुले ठोस प्रमाणबाट पुष्टि गर भनेर प्रमलाई चुनाैति दिनु पर्ने हो नी । जो उत्खननबाट हुन सक्ला ।
अर्को कुरा छिमेकी देश भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता आउने भो भनेर रोइलो गर्ने नेपाली बुज्रुकहरु र विद्वानहरु यति धेरै भेटिए । यदि रामको जन्मभुमि प्रमले दाबि गरेको स्थानमै हो रै छ भने के तिक्तताभन्दा माथि अरु के के हुन्छ होला त छिमेकी मुलुकसँग ? के बज्रपात नै हुन्छ ? भारत भन्ने देशको प्राण नै यसैमा अडिएको हो ? यो नक्कली सावित भएमा भारतले लाज शरम मानेर शिर झुकाउनु पर्ने हो ? दशकौ देखि भारतमा पनि अयोध्याका बारेमा विवाद कायम छ । नेपालले दाबि गर्नै नपाउने हो ?
अहिले दाबि गरिएको ठोरी अयोध्या भएको प्रमाणित भएन भने हाल भनिएकोअयोध्याको महिमा पनि झनै बढ्ने छ । ठोरीकै स्थान प्रमाणित भयो भने पनि श्रीरामको असली भक्तहरुलाई त यो ठूलाे गर्वको कुरा हो । उनीहरुले रामको असली जन्मस्थानमा टेक्दा गर्व र महानतम अनुभुति गर्न पाउने छन् । यस विषयमा प्रमलाई गाली गरेर , पागल भनेर । बोलीमा अंकुस लगाउनु पर्छ भनेर उफ्रनु मानसिक दरिद्रता बाहेक केही होइन । पुर्वीय दर्शनमा दक्खल राख्ने विद्वानहरू दुवै देशमा छन । नामि इतिहासकारहरु पनि छन । उनिहरुले यसको हो हैन भन्ने निर्क्यैाल गर्न तर्फ अग्रसर हुनु जरुरी छ ।
यो विषयका लागि प्रमलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । यही विषय अरु कसैले बोलिदिँदा यतिको चर्चा र परिचर्चा हुन्न थियो होला । केही लेखकहरुले यस विषयमा केही पहिले देखिनै बहस र लेख लेखि सकेका थिए । यसले भारतको नेपाल प्रतिको हेराइमा पनि जुरुर फरक पार्छ नै । प्रधानमन्त्रीले नै यसबारेमा बाेलिदिएकाेमा विषयकाे गम्भिरता अझ बढेकाे हाे । हाेइन भने यसबारेमा पटक पटक पनि अयाेध्याबारे अध्ययन नभएका हाेइनन् र नेपालमा अयाेध्या हुन सक्ने विचारहरू विभिन्न विद्वानहरूले प्रस्तुत नगरेका हाेइनन् । तर यस बारेमा हालसम्म गम्भिर भएर साेचिएकाे थिएन् ।
इतिहास तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुन्छन् त्यसैले महाभारत, रामायणकालीन युगका प्रमाणहरू प्रष्ट र यथेष्ठ नहुन सक्दछन् र यसबारे थप अध्ययन अनुसन्धान र उत्खनन जरूरी हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीकाे यस भनाइले पक्कै पनि थप अनुसन्धान र अध्ययनका लागि बाटाे खुलेकाे छ । पक्कै पनि यसबारेमा विवाद गरेर कसैलाइ गिराउनु र निचाे देखाउनु भन्दा थप अनुसन्धान गर्ने बाटाे खुलेकाे छ र यसलाइ अवसरकाे रूपमा लिएर अयाेध्याबारे थप अनुसन्धान गर्नु आजकाे आवश्यकता हाे ।
नेपालले आफ्नो स्वाभिमान र राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण बिषयहरुमा आफनो स्वतन्त्र विचार बिश्वसामु राख्ने हैसियत राख्दछ । पहिले जस्तो नेपालकै विविध कुराहरुमा खुल्लम खुल्ला हस्तक्षेप र अतिक्रमण गर्न सकिन्न भन्ने पाठ पनि भारतले सिक्नेछ । अयोध्या होस वा लिपुलेकको बिषय होस खुल्ला बहस गर्न भारत तयार हुनुपर्दछ । तथ्य र प्रमाणलाइ स्विकार गर्न भारतले पनि सिक्नु पर्दछ । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अभिव्यक्ति राख्दैमा भारतसंगको समबन्ध बिग्रिन्छ भन्ने मानसिकता गलत हो ।
सिन्धुली, दुम्जा (हाल काठमाडाैं)